Amabele eNingizimu Afrika, South Africa
Amabele eNingizimu Afrika
Amabele (Sorghum bicolor) yi-okusanhlamvu okungenayo i-gluten futhi iyisitshalo sesihlanu esivunyiwe ngokusanhlamvu emhlabeni jikelele ngemuva kokolweni, ilayisi, ummbila nebhali. Imifino ibizwa nangokuthi amabele thoro, Amazinba noBabele. Kuyinto isitshalo esikhulayo esikhula utshani esineziqabunga (njengommbila) futhi sikhiqiza okusanhlamvu epulazini elinjengotshani.
Kukhona izinhlobo ezingaphezu kuka-30 kodwa kungenzeka ukuthi zitholakala e-Ethiopia futhi zisakazeka e-Afrika nasezindaweni ezizungezile zomhlaba. Izinhlayiya ezitshalwe eNingizimu Afrika zikhulile ezindaweni ezidabulayo zezifundazwe ezisenyakatho eNingizimu Afrika lapho zitshalwe phakathi kuka-Okthoba kuya phakathi noDisemba. I-Free State ikhiqiza cishe ngamaphesenti angu-50 eNingizimu Afrika. Ukukhiqizwa okulinganiselwe kwenzalo yenhlamvu kuyinto 2 ithoni / ha.
Imfino isetshenziselwa ukusetshenziswa komuntu (okusanhlamvu, ufulawa, ubhiya) kanye nokudla kwesilwane njenge-silage noma eyenziwe ibe yi-hay. Imfucumfucu isetshenziselwa ukufaka amaphakheji angasetshenzisiwe, i-wallboard, kanye nokukhiqizwa kwamabhasikidi kanye namabhulashi.
Umthamo we-starch we-okusanhlamvu okusanhlamvu u-7 - 10% ophakeme kunommbila, okwenza kube kuhle kakhulu ekukhiqizeni i-ethanol. I-ethanol isetshenziswe njengamafutha.
Amabele okusanhlamvu ahlanganiswa zibe ufulawa futhi asetshenziswe ku-porridge (njenge 'Maltabella'), isinkwa esingenamvubelo, amakhukhi, amaqebelengwane, iziphuzo zomswakama kanye neziphuzo ezinomsoco. Ukudla okusanhlamvu okuphelele kuzoqinisekisa ukuthi kunomsoco omkhulu; cwilisa emanzini ubusuku bese ubilisa njengelayisi.
I-sorghum ingenye yemithombo engcono kakhulu etholakalayo ye-fiber yokudla, iphezulu amaprotheni, imithombo enhle yensimbi, i-phosphorus, i-magnesium, ithusi, i-calcium, i-zinc kanye ne-potassium ngenkathi uhlaka lwamagatsha lunezinambuzane ezinama-antioxidants amaningi kunama-blueberries, ama-strawberry, kanye plums.
Ummbila Njengezilwane Zezilwane
Njengokudla kwezilwane, utshwala lusetshenziswa njengomthombo wamandla wezinkukhu, izingulube, kanye nama-ruminants - izinkomo, izimvu njll. Izinhlamvu kufanele zicutshungulwe ngaphambi kokuba zondliwe ezilwaneni - ukwenza kube lula ukuyigaya kungadliwa, kuchotshozwe futhi senzeke ngaphambi kokuyisebenzisa.
Ummbila usebenza njengefolda ehlobo ewusizo - ngokuba isiliva noma i-hay lapho ikhulile ngaphansi kokunisela ezindaweni ezomile. Izitshalo ezisele ngemuva kokuvuna zingadliwa njengoba ezinye izinhlobo zihlala ziluhlaza isikhathi eside.
Umuthi owomile kakhulu owenziwe ngamabele utholakala ekuvuthweni noma uma iziqu zide ubude obuyi-80 kuya ku-120 cm. Izindawo eziphakeme kangaka zifanelekile ngopuni, u-silage kanye noqweqwe oluhlaza okwesibhakabhaka futhi zingcono kakhulu ezidliwayo ku-20 kuya ku-30 ​​cm ubude.